Monthly Bonus For August 2020 ? Queen Royal ? New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 217,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB-000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Nyein Nyein San August လအတွင်း New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 217,000 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Queen Royal အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (580) သိန်းကျပ်တိတိ နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream (10,850) ထုပ် နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Queen Royal ? Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 29,640 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB-000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Nyein Nyein San August လအတွင်း Better Skin Coffee Soap Scrub အတုံး 29,640 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Queen Royal အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (129) သိန်း (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For August 2020 ? Silver ? Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB-000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Nyein Nyein San August လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Silver Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (4) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Double Crown ? Nano Brush ဘူး 4,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB-000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Nyein Nyein San July လအတွင်း Nano Brush ဘူး 4,200 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Double Crown အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (43) သိန်း (4) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus For July 2020 ? Queen Royal ? Beaute Cafe အထုပ် 12,200 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB-000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Nyein Nyein San July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 12,200 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Queen Royal အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ?ငွေသား (154) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 32000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nyein Nyein San !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 32000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Queen Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (213) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Garnier Essence ဘူး 9240 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB000005) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nyein Nyein San !!! June လအတွင်း Garnier Essence ဘူး 9240 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ?? Diamond Crown Agent ?? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (48) သိန်း (4) သောင်းကျပ်တိတိနှင့် ???? Garnier Essence ဘူး (385) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို ဆပ်ပြာတုံး 18120 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကေတာ့ Nyein Nyein San (FB000005) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nyein Nyein San !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 18120 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Double Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (73) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို New Skiin Supplement ဘူး 800 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nyein Nyein San !!! June လအတွင်း New Skiin Supplement ဘူး 800 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (15) သိန်းကျပ်တိတိနှင့် ???? New Skiin Supplement (35) ဘူး နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 3100 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Nyein Nyein San (FB000005) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Nyein Nyein San !!! June လအတွင်း ဘူး 3100 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Double Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (31)သိန်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။